Ezekieri 43 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
43 Zvino akandiendesa kugedhi, iro gedhi rakatarira nechokumabvazuva.+ 2 Uye tarira! kubwinya+ kwaMwari waIsraeri kwakanga kuchibva nechokumabvazuva,+ inzwi rake rakanga rakaita sokutinhira kwemvura zhinji;+ uye nyika yakavhenekerwa nokubwinya kwake.+ 3 Zvakanga zvakaita sezviya zvandakanga ndamboratidzwa,+ zvandakanga ndamboratidzwa pandakauya kuzoparadza guta;+ uye paiva nezvandakaona zvakanga zvakaita sezviya zvandakaona pedyo norwizi rwaKebhari,+ uye ini ndakawira pasi nechiso changu. 4 Zvino kubwinya+ kwaJehovha kwakapinda muImba nenzira yokugedhi rakanga rakatarira nechokumabvazuva.+ 5 Mudzimu wakandisimudza,+ ukandipinza muchivanze chomukati, uye tarira! Imba yacho yakanga yazara nokubwinya kwaJehovha.+ 6 Zvino ndakatanga kunzwa mumwe munhu achitaura neni ari muImba yacho,+ uye murume uya akanga amira pedyo neni.+ 7 Iye akati kwandiri: “Mwanakomana womunhu, iyi ndiyo nzvimbo yechigaro changu choumambo+ nenzvimbo yetsoka dzangu,+ pandichagara pakati pevanakomana vaIsraeri nokusingagumi;+ uye imba yaIsraeri haizosvibisizve zita rangu dzvene,+ ivo uye madzimambo avo,+ nokufeva kwavo uye nezvitunha+ zvemadzimambo avo paanofa, 8 nokuisa chikumbaridzo chavo pamwe chete nechikumbaridzo changu negwatidziro ravo pedyo negwatidziro rangu, pakati pangu navo paine madziro.+ Vakasvibisa zita rangu dzvene nezvinhu zvavo zvinosemesa zvavakaita,+ zvokuti ndakavaparadza ndakatsamwa.+ 9 Zvino ngavabvise ufeve hwavo+ nezvitunha zvemadzimambo avo vazviise kure neni,+ uye ini ndichagara pakati pavo nokusingagumi.+ 10 “Zvino iwe, haiwa mwanakomana womunhu, udza imba yaIsraeri nezveImba yacho,+ kuti vanyadziswe nokuda kwokukanganisa kwavo,+ uye ngavayere mavakirwo ayo. 11 Kana vakanyara nokuda kwezvose zvavakaita, uvazivise uye unyore purani yeImba yacho+ vachizviona, nokurongwa kwayo nemokubuda namo mayo nemokupinda namo mayo, nepurani dzayo dzose nokurondedzerwa kwayo kwose, nepurani dzayo dzose nemitemo yayo yose, kuti vachengete purani yayo yose nokurondedzerwa kwayo kwose, uye kuti vazviite.+ 12 Uyu ndiwo mutemo weImba yacho. Pamusoro pegomo, nharaunda yayo yose yakaipoteredza chinhu chitsvenetsvene.+ Tarira! Uyu ndiwo mutemo weImba yacho. 13 “Uku ndiko kuyerwa kweatari mumakubhiti,+ kubhiti rimwe chete rakareba kubhiti rimwe chete noupamhi hwechanza.+ Pasi payo ikubhiti rimwe chete. Kufara kwayo ikubhiti rimwe chete. Mukombero wayo uri pamusoro pomuromo wayo kupoterera, wakafara sezvinoita minwe kana yatambanudzwa. Izvi ndizvo zvakaita pasi peatari. 14 Kubvira pasi pauriri kusvikira parukuva rwepasi rwakapoterera pane makubhiti maviri, kufara kwacho ikubhiti rimwe chete. Kubvira parukuva ruduku rwakapoterera kusvikira parukuva rukuru rwakapoterera pane makubhiti mana, uye kufara kwarwo ikubhiti rimwe chete. 15 Choto cheatari makubhiti mana, uye kubva pachoto cheatari zvichikwira kumusoro pane nyanga ina.+ 16 Choto cheatari chakareba makubhiti gumi nemaviri, chakafara makubhiti gumi nemaviri,+ mativi acho mana akaenzana.+ 17 Rukuva rwakapoterera rwakareba makubhiti gumi nemana, rwakafara makubhiti gumi nemana, kumativi arwo mana; uye mukombero wakaipoterera ihafu yekubhiti, uye pasi payo ikubhiti rimwe chete kupoterera. “Matanho ayo akatarira kumabvazuva.” 18 Zvino iye akati kwandiri: “Mwanakomana womunhu, zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Iyi ndiyo mirau yeatari pazuva rainogadzirwa, kuti mupe zvinopiwa zvinopiswa zvakakwana+ pamusoro payo uye kuti musase ropa pamusoro payo.’+ 19 “‘Unofanira kupa vapristi vevaRevhi,+ vevana vaZadhoki,+ vaya vanoswedera kwandiri,’+ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha, ‘nzombe duku, mukono unobva paboka kuti uve chinopiwa chechivi,+ kuti vandishumire. 20 Unofanira kutora rimwe ropa rayo, woriisa pamusoro penyanga dzayo ina nepamakona ayo mana orukuva rwakapoterera nepamusoro pomukombero wakapoterera, woinatsa pachivi,+ woiyananisira.+ 21 Unofanira kutora nzombe duku, icho chinopiwa chechivi, uye mumwe munhu anofanira kuipisira munzvimbo yakatarwa yeImba yacho, kunze kwenzvimbo tsvene.+ 22 Pazuva rechipiri uchaswededza gotora rembudzi, rakanaka, kuti rive chinopiwa chechivi; uye vanofanira kunatsa atari yacho pachivi sokuinatsa kwavakaita pachivi vachishandisa nzombe duku.’ 23 “‘Kana wapedza kuinatsa pachivi uchaswededza nzombe duku, mwana wemombe mukono unobva paboka remombe, wakanaka, negondohwe rinobva paboka remakwai, rakanaka. 24 Unofanira kuzviswededza pamberi paJehovha, uye vapristi vachamwaya munyu pamusoro pazvo vozvipa+ kuti zvive chinopiwa chinopiswa chakakwana kuna Jehovha. 25 Uchapa nhongo kuti ive chinopiwa chechivi chezuva racho kwemazuva manomwe;+ uye nzombe duku, mwana wemombe mukono unobva paboka remombe, negondohwe rinobva paboka remakwai, zvakakwana, vachazvipa. 26 Vachayananisira+ atari kwemazuva manomwe, uye vanofanira kuichenesa, voitsaurira. 27 Vachapedza mazuva acho. Zvino pazuva rechisere,+ kubvira ipapo vapristi vachapa chinopiwa chinopiswa chakakwana chenyu imi nezvibayiro zvenyu zvokugoverana pamusoro peatari; uye ndichakufarirai,’+ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha.”